Zimbabwe's Supreme Court has ordered a permanent stay of the criminal proceedings against prominent human rights activist Jestina Mukoko, in a move welcomed by campaigners.
A Zimbabwean Catholic priest has told Catholic aid agency CAFOD that despite supermarket shelves heaving with food imported from South Africa, the majority of Zimbabweans are still in need of food and basic medicines.
Christian students say Zimbabwe's unity government is failing
Zimbabwe's coalition government has failed to address widespread hunger and human rights violations in the country, a national Christian youth movement has charged.
Zimbabwean Prime Minister booed out of Southwark Cathedral
Zimbabwean PM Morgan Tsvangirai was forced to abandon a speech at Southwark Anglican Cathedral, as ex-pats jeered his call for a return to their homeland to rebuild the nation.
UK public donations for the joint Zimbabwe emergency and development appeal launched by the Anglican Archbishops of Canterbury and York have reached £292,330, the administrators of the fund have announced this week.